Vaovao - Fanavaozana vaovao momba ny serivisy famoronana atin'akanjo vehivavy Custom
Fohy loatra ny fiainana amin'ny bra tsy mahazo aina sy tsy miloloha!
Mpanorina antsika: Tiany foana ny kiraro, ary antenainy fa ny vehivavy rehetra dia afaka manao kiraro avo mifanentana amin'ny tongony sy hanome hery azy ireo bebe kokoa. Nanangana marika famoronana kiraro tsy miankina tamin'ny taona 1998, nifantoka tamin'ny fikarohana ny fomba hanaovana kiraro vehivavy maoderina milamina sy lamaody izy. Nopotehiny ny fivoriambe ary nasiany endrika koa. Tsy asa sarotra intsony ny fahazoana vehivavy manao kiraro avo. Manao kiraro avo tsy voafatotrao ianao dia mandehana any an-danitra amin'ny nofinao.
Na izany aza, tena maniry mafy ihany koa izy ny hahafoanan'ny vehivavy ny tenany amin'ny atin'akanjo efa ela niainany nandritra ny taona maro. Izy aza dia nieritreritra ny foto-kevitry ny "Ny tsirairay dia manana atin'akanjo namboarina" mba hahatsapany fa ny vehivavy tsirairay dia mendrika ny atin'akanjo manokana.
Ity dia fomba iray hanehoana ny vehivavy feno angovo, mahafatifaty ary mahafatifaty. Mino izy fa ny filan'ny nofo dia tsy hoe momba ny fahafinaretana ny hafa, fa fanehoana fahalalahana hafa. Nanomboka namorona marika atin'akanjo izy tamin'ny 2004.
Manana andraikitra tsy voahozongozona izy, iraka hitondra lanjany mavesatra, fahitana ny mpanjifa aloha, ary andraikitra hamaly ny filan'ny mpanjifa tsirairay.
Hoy izy: tianay foana ny namolavola sy manjaitra, tena tia fanamby izahay, afaka manjaitra bra tsara aina izay tena niavaka koa. Ny ampahany tsara indrindra dia ny nahatonga azy ireo hijery tsara tarehy tanteraka!
olona isan'andro amin'ny bras isan'andro. bras mampiadana, Silhouettes dia marevaka kokoa, miolakolaka ary miolakolaka ary tsy misy sarisary! 10 taona mahery izahay no niasa ary ny ampahany tianay indrindra amin'izany dia ny fahatokisana azonay omena ny mpanjifantsika. Ny olona avy lavitra lavitra toy ny amerikanina sy akaiky azy dia tonga ho azy manokana, mampahazo aina, manaitaitra, manao azy tsara, tariby tsy misy mandroba, fanao mahazatra.